(Madaxweyne Sankara ):-Ninkii Diidey in uu Gacanta u hoorsado Reer Galbeedka:-(Akhriso) – hareerley News
Madaxdii gumaysi diidka geesiyada ahaa ee soo maray qaarada afrika marka laga hadlayo taariikhdooda waxaa safka hore kaga jira Madaxweynihii hore ee dalka Burkinofaso Thomas Sankara oo talada wadankiisa qabtay sannadkii 1983-dii xiligaas oo uu ahaa nin dhalinyaro ah oo da’diisu ahayd 33 sano jir.
Hogaamiye Sankara wakhtigaas waxyaabihii ugu horreeyay ee uu qabtay markii uu xukunka la wareegay waxaa kamid ahaa inuu dalka ka tirtiro
musuqmaasuqa iyo faragalinta shisheeye,waxaana si uu qorshihiisa uu u fuliyo uu iska bilaabay in isagu mushaar ahaan uu u qaato lacag dhan $450doolar bishii.
Madaxweyne Sankara arimaha kale ee uu ku dhaqaaqay intii uu talada hayay waxaa kamid ahaa in uu madaxweynuhu uu isticmaalo hal gaari oo nuucyada aan qaaliga ahayn ah wuxuuna sidoo kale dalbaday in ay shaqaalaha dawladu xirtaan dharka laga sameeyo cudbiga dalka ka baxa oo ay farsamo yaqaanada reer Burkinofaso ah si uu u dhiirigaliyo wax soo saarka dalka waxaana mar wax laga weydiiyay sababta uu u diiday in ay dadku sawirkiisa gidaarada suraan ayaa wuxuu jawaabay waxaa jira 7 milyan oo Sankara.
Madaxweynihii hore ee dalka Burkinofaso Thomas Sankara wuxuu diiday inuu dalalka reer galbeedka ka qaato deeqaha ay siiyaan dalalka afrikaanka ah isagoo aaminsanaa qaacidada odhanaysa “Ruuxa cunto ku siiya ayaa kuu talya” Sidaa daraadeed wuxuu shacabkiisu ku dhiirigaliyay in ay tabcadaan beeraha soona saartaan cuntadooda intii ay gacanta u hoorsan lahaayeen reer galbeedka deeqdiisa ku raadinaya inay qaataan khayiraadkaaga, wuxuu isla sanadkaas wax soo saarka qamadigu kor u kacay 1700-3800 halkii hektar isagoo dalkiisa ka dhigay mid cunto ahaan isku filan.
Hogaamiyahan wuxuu si codkarnimo leh uga hadlay shirarka madaxda afrikaanka ay isugu yimaadaan isagoo dhaliilay gumaysiga wejiga cusub kusoo galaya afrika iyaga oo huwan shaarar
ganacs, dhaqaale iwm wuxuuna ku dhiirigaliyay in ay dalalka Afrikaanku iska diidaan in ay bixiyaan deymaha reer galbeedka ku leeyihiin isagoo ku andacoonaya in saboolka iyo ruuxa khiyraadkiisa la boobayaba aysan waajib ku ahayn in ay iska bixiyaan deymaha lagu leeyahay.
Wuxuu dib u iibiyay gawaarida ay madaxda dawladu ku socdaan ee ahaa nooca loo yaqaano Marcedes wuxuuna ku badalay nooca loo yaqaano Renault 5 oo qiimo ahaan aad u jabnaa wuxuuna ka dhigay gaariga rasmiga ah ee ay wasiiradu ku socdaan, wuxuu sidoo kale mamnuucay in ay madaxdu isticmaalaan ticketka VIP (1st class airline ticket) wuxuuna dhulkii dib ugu qeybiyay beeralaydii dalkaas.
Dalalka reer galbeedka gaar ahaan faransiiska oo dalkaas gumaysan jiray ayaa markii ay dareemeen in Madaxweyne Sankara uu halis ku yahay qorshohooda ayeey waxa ay u abaabuleen shirqool lagu dilayo waxaana dhacday in sanadkii 1987-dii faransiiska rag u adeega ah ay khaarajiyeen, isagoo ku dhawaaqaya “Hadii aad dishaan dadka kacaanka ah waxaa adag sida aad ku dishaan afkaartooda”.
W/Q:- Ceynaanshe Axmed Maxamed home facebook